कस्तो अचम्म २ महिनाको नानीको पेटमा पनि बच्चा ! | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← दुई युवतीले हत्या गरि लुटे
मुख्य तीन दलबीचको बैठक निष्कर्ष विहीन →
कस्तो अचम्म २ महिनाको नानीको पेटमा पनि बच्चा !
Posted on 19/11/2012 by शिव पौडेल | टिप्पणी छोड्नुहोस्
हामीले यो दुनियामा बाच्नु मात्रै पर्छ अनेक देख्नु र सुन्न पाइन्छ । बुढापाकाले भन्ने गरेको सहि हो रहेछ भारतको अररिया जिल्लाको जोकिहाथ थानाक्षेत्रको बन्कोरा गाउका गङ्गा प्रसाद सिंहकि दुइ महिनाकी छोरी पल्लवीको गर्भमा बच्चा भेटिएको खबर बाहिर आएको छ । यो आश्चर्यजनक घटना भारतमा दोस्रोपटक र बिहारमा पहिलो पटक घटेको पनि समाचारमा उल्लेख छ । घटनाको पुष्टि गर्न अल्ट्रासाउण्ड र सिटी स्क्यान दुबई गरिएको पनि समाचारमा दावी गरिएको छ ।
दुइ महिना अगाडी गंगाकि श्रीमती मंजु देवीले छोरीलाई जन्म दिईन । जसको जन्मदै पेट फुलेको देखिन्थ्यो, जसले गर्दा बच्चालाई केहि गाह्रो भएको महसुस गर्न सकिन्थ्यो । अन्जुले अररियाकै डा. नसिर र डा.ओम प्रकाशलाई देखाउदा डाक्टरहरुले पेटमा पनि भएको भन्दै उपचार गरेको र पनि कुनै सुधार नभएकोले गर्दा शिशु रोग बिशेषज्ञ डा. अमरेन्द्र कुमारलाई देखाउंदा यस्तो घटना पत्ता लागेको खबरमा उल्लेख छ ।
रिपोर्टमा भनिएको छ पल्लविको पेटमा बच्चा भेटियो जसलाई सिटि स्क्यान गरेर पुष्टि गरियो । रिपोर्ट पोजिटिभ आउनेबित्तिकै समाचार पुरै इलाकामा फैलियो । बच्चीलाई हेर्न अस्पतालमा मिडिया संग सम्बन्धित तथा स्थानीय मानिसहरुको ठुलो घुइंचो लागेको छ ।
समाचारमा भनिएको छ बच्चाको पेटमा बच्चा भेटिएको यो पहिलो घटना होइन सन् १८०८ मा चिकित्सा विज्ञानको राम्रो विकास नहुँदै जर्ज विलियमले यो घटना देखेको बताएका थिए । त्यतिखेर पोस्टमार्टमको दौरान यस्तो घटना घटेको थियो । समाचारमा अगाडी भनिएको छ १९९० अप्रिलमा ग्रिस र १९९९ मा भारतकै नागपुरमा यस्तो घटना बाहिर आएको थियो । पछी २००६ मा पाकिस्तान, २००८ मा इन्डोनेशिया, २००८ र २००९ मा चिन र २०११ मा युनानको इजिप्टमा यस्ता घटनाहरु घटेका थिए । (श्रोत: E NET NEPAL)